Afaka mividy ao amin'ny Apple Store amin'ny Apple Watch | ianao izao Vaovao IPhone
Luis Padilla | | Fampiharana iPhone, maro
Ny fanavaozana farany ny app Apple Store dia mikendry ny hanao varotra haingana kokoa, ara-potoana amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra. Miaraka amin'ny kinova farany izay efa ananantsika ao amin'ny Apple Store, tsy vitan'ny hoe namboarina (farany) ho amin'ny fampandrenesana marobe momba ny iOS 10 ilay fampiharana, Efa hitantsika eo amin'ny efijery an'ny Apple Watch ny vokatra tianay, ary afaka mividy azy ireo koa izahay mivantana avy amin'ny famantaranandro mampiasa Apple Pay.
Ny fampiharana Apple Store, maimaim-poana sy manerantany, dia efa misy mifanentana amin'ireo fampandrenesana manankarena iOS 10, midika izany fa afaka mifandray amin'izy ireo isika amin'ny efijery hidin-trano nefa tsy mila manokatra ny iPhone. Saingy angamba ny singa manandanja indrindra amin'ity fanavaozana vaovao ity dia ny fahafahanao mahita ireo vokatra ankafizinay.. Tsy hanana fidirana amin'ny katalaogy feno an'ny magazay Apple izahay, afa-tsy amin'ireo entana nomarihinay ho ankafizinay avy amin'ny fampiharana ho an'ny iPhone, iPad na avy amin'ny tranonkala. Io dia hahafahantsika mahita ny baiko napetrakay ihany koa, ary koa ny toerana misy ireo magazay akaiky indrindra sy ny atrikasa misy ao aminy.
Saingy ny tsy nampoizina dia ny fahafahany mividy mivantana amin'ny fampiharana ny famantaranandro Apple. Raha manisy marika ny vokatra ho tianao ianao dia azonao atao ny mividy azy amin'ny famantaranandro amin'ny alàlan'ny Apple Pay. Mahaliana fa tsy ampiasaina ny kaonty Apple, satria mitranga amin'ny fampiharana iPhone na amin'ny Internet izany, fa ny karatra nampiarahinay amin'ny Apple Pay dia ampiasaina handoavana ny baiko. Tsy afaka mividy (farafaharatsiny mandritra izao fotoana izao) ny vokatra lafo vidy, ny kojakoja "mora" toa ny fonony ihany. Azontsika atao ve ny mividy AirPods amin'ity Noely ity amin'ny Apple Watch? Amin'izao fotoana izao dia tsy mamela ahy hividy na inona na inona izy io, tsy manome ahy ny safidy hampiasa Apple Pay. Tsy fantatsika raha tsy misy io asa io raha tsy any Etazonia ihany na raha mila miandry ny fanitarana azy any amin'ny firenena hafa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Afaka mividy ao amin'ny Apple Store amin'ny Apple Watch ianao izao
Izy ireo mahita fomba iray hialana amin'ny hidin-trano fampidirana iOS